Raharaha Lylison sy Riana Andriamandavy : Tsy mitsabaka ny asan’ny fitsarana ny Antenimieran-doholona -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha Lylison sy Riana Andriamandavy : Tsy mitsabaka ny asan’ny fitsarana ny Antenimieran-doholona
03/05/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly 02 Mey ny fivoriana ara-potoanan’ny parlemanta, natao tao amin’ny Antenimieran-doholona etsy Anosy. Fivoriana voalohany atao amin’ity taona 2017 ity izy io, ary maharitra 60 andro. Araka ny efa fantatra moa dia manatanteraka izany fivoriana izany indroa ao anatin’ny taona ity antenimiera ity, ka ny talata fahatelon’ny volana Oktobra kosa no ho tontosaina ny fivoriana faharoa. Teboka maromaro no noresahina nandritra ny fanokafana ofisialy. Tao ny lafiny volavolan-dalàna, ka handinihana misimisy kokoa ny amin’ny hoavy sy izay tsy mbola tontosa tamin’ny herintaona, ka ezahina ny hovitaina amin’ity taona ity. Ankoatra izay, nasiana teboka lehibe ny raharaha Loholona Lylison sy ny mikasika an’i Riana Andriamandavy, izay nanjary resaka nafana tato ho ato, indrindra fa taorian’ny fandroahany ireo mpitsara nikasa hijery aniI Claudine tao amin’ny hopitaly HJRA. Nilaza àry nanamafy araka izany ny filohan’ny Antenimieran-doholona Honoré Rakotomanana ny amin’ny tokony hanajana ny lalàna misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Midika izany fa misy ny rafitra natokana hisahana izany, dia ny fitsarana. Ka tsy tokony hisy hitsabaka ny fahefana ananan’ny mpitsara mikasika io raharaha io, satria anjarany ny mandray andraikitra sy fepetra raha toa ka ilainy izany. Nanamafy hatrany izy fa any amin’ny fitsarana no tokony hipetraka ny fanontaniana raha misy manitikitika ny mpanao gazety, indrindra indrindra. Eo ihany koa ny ambetin-teny mikasika ny kaominina. Nambarany fa miainga avy any ifotony ny fampandrosoana ary avy ao amin’ny kaominina no itarafana izany. Midika izany, fa tokony ho tonga any aminy ara-potoana ny vola tokony hampiasainy, nefa aoka kosa ho tsara tantana ary misy tatitra mazava tsara sy mirindra araka ny tokony ho izy.
Farany, tsipi-teny ho an’ny vahoaka malagasy no namaranan’ity laharana voalohany ao amin’ny Antenimieran-doholona ity ny kabary nataony. Araka izany, miantso ny vahoaka malagasy izy hanao vaindohan-draharaha ny fampandrosoana ny firenena. Fantatra mantsy fa miha-ratsy ny fiarahamonina ankehitriny, etsy andaniny ny fitsaram-bahoaka izay mirongatra aoka izany. Ity antenimiera ity mantsy dia natao hampifandanja ny fahefana malagasy. Noho izany, hoy hatrany izy, vonona hiara-hiasa akaiky amin’ny vahoaka amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny tenany satria tsy vitany samirery izany. “Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy”, izany no teny nentin’ity filoha ity namaranana ny kabariny.
Famoahana ny voka-pifidianana : Mampandry adrisa ny Ceni
Nanambara ny teo anivon’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na CENI fa efa saika tontosa avokoa ny fikirakirana ny voka-pifidianana avy amin’ireo faritra be mpifidy toa an’Antananarivo sy Fianarantsoa. Toa hafahafa ihany anefa izany ...Tohiny
Ravalomanana-Rajoelina : Milalao fiainam-bahoaka!